On oct 23, 2019 3 193
Notontosaina ny alahady 20 Oktobra 2019 lasa teo, ny lanonam-pamaranana ny fanatanjahan-tena an-tsekoly (Sport scolaire) andiany faha-27, izay nampitondraina ny anarana hoe « Sorongôla », natao tao amin’ny Renivohitr’i Toamasina, faritra Atsinanana. Naharitra fito andro ny hetsika, dia ny 14 Oktobra 2019, ka hatramin’ny 20 Oktobra 2019 teo, ary nahitana ny fandraisan’ireo mpianatra avy tamin’ireo faritra 23 anjara. Taranja ara-panatanjahan-tena maro, no natao tamin’izany, toy ny volley-ball sokajy zazavavy sy zazalahy ; ny taranja baolina kitra, izay nahitana sokajy zazavavy sy zazalahy ihany koa. Teo koa ny taranja « Athlétisme ».
Ny sabotsy 19 Oktobra, ny lalao famaranana teo amin’ny taranja baolina kitra lahy sy vavy, tamin’ity fanatanjahan-tena an-tsekoly ity. Nahazo ny voalohany teo amin’ny sokajy zazavavy ny avy amin’ny DRENETP Analanjirofo, faharoa ny DIANA, ary fahatelo Boeny. Sokajy lehilahy indray dia ny DRENETP Atsinanana no nahazo ny amboara, faharoa Boeny, ary fahatelo ny Atsimo Atsinanana. Teo amin’ny taranja Volley-ball zazavavy indray, norombahin’ny DRENETP Boeny ny amboara, faharoa Anôsy, ary fahatelo Analamanga. Teo amin’ny sokajy zazalahy: ny DRENETP Atsinanana, faharoa Vakinankaratra, ary fahatelo ny ekipan’i Atsimo andrefana. Lalao izay natao tao amin’ny « Centre Régionale de la Jeunesse et des sports » (CRJS).
Ny DRENETP Sofia Antsohihy, no handray ity lalao ity amin’ny taona 2020. Nandritra ny lanomam-pamaranana teo anoloan’ny Tranoben’ny Faritra atsinanana, no nanambaran’ny minisitra, fa fahombiazna tanteraka ny tamin’iny andiany faha-27 teo iny. Isany nisalahy tamin’izany ny teo anivon’ny fianakaviam-ben’ny minisitera tao Atsinanana, ny Fitondram-panjakana, izay notronon’ny vahoakan’i Toamasina. Tratra ny tanjona hoy izy. Nankahery ireo resy nandritra ny lalao ny minisitra Volahaingo Marie Thérèse, mba hanao bebe kokoa amin’ny taona manaraka. Namporisika hatrany ireo naharesy koa ny tenany. Isany nanohana ity hetsika ity, ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena, ny Orinasa sy Banky vitsivitsy ao an-toerana, izay nisaoran’ny minisitra.
Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ireo Solombavambahoaka sy solontenam-panjakana tao an-toerana tonga nanotrona ity lanonam-pamaranana hetsika “Sorongôla” ity, no nilazan’izy ireo, fa henim-boninahitra ny Renivohitr’i Toamasina. Nolazain’izy ireo koa, fa tokony ho tohizana hatrany ny hetsika toy izao, hamporisihana ny ankizy sy tanora mba tsy hirona amin-javatra hafa. Ny fanatanjahan-tena an-tsekoly mantsy, hoy izy ireo, dia mampitombo sy mampivelatra ny vatana sy fahalalan’ny ankizy, ary hampivelaran’izy ireo ny maha izy azy. Tsy nisy loza sy ny sampona nandritra ny lalao “Sport scolaire” teo iny. Hananana vatana tomady sy saina salama, ny fanatanjahan-tena, hoy ny solombavambahoaka miarahalahy. Teo amin’ny laharana ankapobeny, ny tao amin’ny DRENETP, no nahazo ny voalohany tamin’ny lalao rehetra nifaninanana.
Ny sehatra toy izao koa, no hahafahana mitaratra ny ho solofon’ny ekipam-pirenena Malagasy atsy ho atsy, hoy ny depiote.
Randrianamboarina Jean Pierre: Kandida tanora, hanome lanja ny fampandrosoana ifotony